Anisan’ny anton-dian’ny Delegasiona notarihin’ny Governora sy ny Solombavam-bahoaka tany Mangabe-Sahananto, ny nanatrika ny lanonan-dehibe fanokafana ny Distrika katolika any an-toerana.
Tamin’ny taona 1938 tany no nanomboka nisy fiangonana taty Mangabe, izay niankina tamin’ny Distrikan’i Foulpointe nandritra fitopolo taona (1950-2020). Ny Alahady 11 Oktobra 2020 no nahazo Distrika i Mangabe, izay ivondronana Paroasy miisa 86, ka teo ambany fiahian’ny Kardinaly TSARAHAZANA Désiré Arsevekan’i Toamasina, izay notronin’ny pretra sy olom-piangonana ary olom-panjakana sy olom-boafidy maro.
Marihina fa ankoatra ny fahasoavan’Andriamanitra azon’izy ireo, dia nanampy betsaka tamin’ny fanokafana ny làlana ny ezaka natao’ny kristianina katolika sy ny mponina taty an-toerana.
Voalazan’ny Kardinaly tamin’ny toriteniny izany mariky ny Firaisan-kina, fitiavana ary hatsaram-po izany ary mbola nanentana izy hoe « Araraoty ny magnano raha manjary, homagno ny fiainagna mandrakizay amin’ny fagnanôvagna ny TSARA dieny mbôla aty an-tany ».
Amin’izao lanonan-dehibe fanokafana ny Distrika Katolika aty Mangabe izao, ny Pretra Elie Simon na i Dadilahy izay hitantana ny Distrika, dia nisafidy ny tenin’Andriamanitra tao amin’ny Tesalonianina 3:11 « izay tsy miasa aoka izy tsy hihinana ». Sady nijoro vavolombelona ny fahavononan’ny mponina hanatsara ny asa nisasarany sy nilatsahan’ny hatsembohany.
Ny Governora RAFIDISON Richard Théodore, raha nadray anjara fitenenana, dia niarahaba ny mpitantana ny Eglizy katolika sy ny vahoakan’Andriamanitra aty amin’ny Diosezy tamin’ny fitsanganan’ny Paroasy telo (03) tatoato. Ary nanamarika Andriamatoa Governora fa misy fiantraikany tsara foana amin’ny fanamorànany fitantanan-draharaham-panjakana izao fivelaran’ny Fiangonana Katolika izao. Satria antenaina hanaraka koa ireo fotodrafitr’asa katolika toy ny Sekoly sy ny toeram-pitsaboana.